I-China 6-10T / D Umkhiqizi Womshini Wokudla Kwezilwane wase-China | I-Tehold
Amandla aphelele: 32KW
Amandla: 6-10T / 24H
Ukulethwa: ezinsukwini eziyi-15
6-10T / D IMFIHLO YOKUPHAKELA IZILWANE
Lo mshini wokuphakelayo ohlakaniphile wokwenza ukudla kwezinkukhu eziyimbudumbudu, okuphakelayo kwezingulube, okuphakelayo kwezinkomo kanye nokuphakelwa kwezinhlanzi. Umugqa wonke uhlanganisa i-crusher, isihlukanisi se-cyclone, i-conveyor, i-mixer, i-granular pelletizer njll.
Njengoba intengo yamabele iqhubeka inyuka, intengo yokudla isalokhu iphakeme futhi, ifektri yokuphakelayo nabathengisi nabo bangeza inzuzo yabo, lokhu kwenza ukuthi izinto zokudla ziphakame kakhulu ngentengo. Ngakho-ke kuhlakaniphile futhi kungokwezomnotho ukuqala umshini wakho wokudla ukuze unciphise izindleko zokondla izilwane, okokudla nakho kungathengiselwa ipulazi noma ukondliwa kwasekhaya. Izinto zokusetshenziswa kungaba ngotshani bezitshalo, ukhula nezinsalela ezivela efektri yokucubungula okusanhlamvu njengamaqebelengwane e-slag, i-bran nofulawa wefolishi. Ngemuva kokwelashwa kwezinto eziphilayo, zihlanganise nofulawa wommbila ne-bran, uvithamini kanye ne-microelement, bese wenza i-granule enokudla okunomsoco ophezulu. Kuzoba lula ukuthi imfuyo nezinhlanzi zigaye futhi zimunce futhi zikhule ngokushesha.
Lo mshini usebenza ngokugeleza kwenqubo, kufaka phakathi ukuchobozwa, ukuxubana nokugcotshwa njll. Lena indlela eyomile yokucubungula, ngesikhathi senqubo, asikho isidingo sokwengeza amanzi noma umusi, futhi umshini uqobo uzokwenza okokusebenza kushelele ngokushisa kokushayisana.
Langaphambilini Umugqa we-15-20TPD Pelletizing
Ukufa Okuphakelayo Kwezilwane
Okuphakelayo Kwezilwane Kusuka Emmbileni
Animal Okuphakelayo Ukwenza Machine
Izigayo Zokuphakela Izilwane
Umshini we-Blender Wokwenza Okuphakelayo Kwezilwane
Isihlanganisi Sokuphakelwa Kwezilwane
Ukulungiselela Ukudla Kwezilwane